सरकारले तत्काल लकडाउन गर्दैन : प्रवक्ता डा. खतिवडा « प्रशासन
सरकारले तत्काल लकडाउन गर्दैन : प्रवक्ता डा. खतिवडा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता डा . युवराज खतिवडाले तत्काल लकडाउन नहुने बताएका छन्।
उनले संक्रमणको जोखिम हेरेर ठाउँ–ठाउँमा लकडाउन गर्न सकिने भन्दै चैत ११ गते जारी भएको जस्तो मुलुकभर लकडाउन नहुने बताए । ‘अहिले पनि दुई दर्जन बढी स्थानीय तहहरूमा लकडाउन गरिएको छ । संक्रमणको जोखिम हेरेर जिल्ला प्रशासनहरूले लकडाउन गर्नसक्छ तर पहिले जस्तो देशभर लकडाउन गर्ने कुरा तत्काल छैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै मन्त्री डा. खतिवडाले लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरु, विद्यालय खुल्ने अवस्था बनिनसकेको बताए । सरकारले भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिने बताए ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढेको भन्दै उपत्यकामा बिहीबाटदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारीमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत यसैगरी कोरोना संक्रमित बढ्ने हो भने अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीले समेत धान्न नसक्ने भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।